Virosy COVID-P1 mampidi-doza vaovao any Brazil, Panama, Cape Verde, Portugal, Japon
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Virosy COVID-P1 mampidi-doza vaovao any Brazil, Panama, Cape Verde, Portugal, Japon
Janoary 15, 2021
COVID 19 dia mitombo, misy karazana vaovao mipoitra. Ny fahatelo izao any Brezila. Ity kinova P1 ity dia efa hitan'ny mpandeha tonga tany Japon. UK dia manidy sidina miditra
Fantatra amin'ny hoe SARS_COV19 fantatra amin'ny anarana hoe P1. Ny aretina vaovao iray dia ny virus miely any Amerika atsimo, manokana ny Brazil, Panama, Cape Verde, ary koa any Portugal.
Miady mafy ny hahafantatra bebe kokoa ny mpahay siansa eran-tany. Tsy mazava raha efa any Angletera ilay viriosy, saingy nisy tranga hita tany Japon nampidirin'ny mpandeha avy any Brezila.
Talohan'izay dia nisy fantsom-baovao fantatra amin'ny anarana hoe B.1.1.7 hita tany UK sy Afrika atsimo ka nahatonga ny sisintany hanidy ny UK tany Eropa sy ny faritra maro hafa eto an-tany.
Any Afrika Atsimo, dokotera sy mpikaroka miady amin'ny tranga faharoa amin'ny tranga Covid-19 mianatra karazana hafa vaovao ary inona no andraikiny amin'ny fiakaran'ny tranga any. Ny variant, fantatra amin'ny anarana hoe B.1.351, dia hita tamin'ny santionany nanomboka tamin'ny Oktobra. Tsy hita izany tany Etazonia
Ny fihenan'ny coronavirus farany sy farany nipoitra dia nipoitra tany Brezila ka nahatonga ny Fanjakana anglisy handràra ny sidina avy any Amerika Atsimo, Panama, Portugal ary Cape Verde.
Voarara ny fiantsonan'ny fiaramanidina manomboka amin'ny 4 ora maraina any UK amin'ny zoma, hoy ny sekreteran'ny fitaterana Grant Shapps tao amin'ny Twitter. Ny fandraràna Portiogey dia vokatry ny "fifamatorana fifamatorana mafy amin'i Brezila," hoy izy.
Fanamarihana DangoBuds: Tatitra nohavaozina farany tamin'ny 2021 Dango Buds & fihenam-bidy ankehitriny!
Kaompaniam-pitaterana an'habakabaka alitalia: hypothèse amin'ny varotra